महानगरको नेतृत्वले सिस्टमा बसेर पोलिसि बनाए बालेन साहलाई साथ दिइन्छन नभए हावाबाट आएका बालेन हावाबाटै जानेछन् – OSNepal
महानगरको नेतृत्वले सिस्टमा बसेर पोलिसि बनाए बालेन साहलाई साथ दिइन्छन नभए हावाबाट आएका बालेन हावाबाटै जानेछन्
Kabita Ghimire (KTM) May 29, 2022 0
काठमाडौं १५ जेठ । काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर २९ मा दोस्रो कार्यकालको लागि पनि नेपाली कांग्रेसका कुश ढकाल निर्वाचित भएका छन् । यस पटक भने उनलाई चुनाव जित्न हम्मे हम्मे नै परेको थियो । जम्मा ५० मतान्तरले विजयी भएका उनलाई वडा वासीले फेरि एक पटक वडाको नेतृत्वमा चुनेका छन् ।
यस भन्दा अघि उनले बाटो ढलान , पिचजस्ता काम सम्मन्न गरिसकेका छन् । अबको पाँच वर्षमा आफुले यो भन्दा अगाडी वडा अध्यक्ष भएर गर्न नसेकेको काग गरेर देखाउने दावी समेत गरेका छन् । साथै उनले काठमाडौं महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर मेयरमा विजयी भएका बालेन साहलार्य पनि चुनौती नै दिएका छन् ,। राम्रो काम गरे साथ दिने यदि नगरे हावाबाट आएका बालेन हावाबाटै जान्छन् भनेका छन् ।
प्रस्तुत छ, काठमाडौं महानगर वडा २९ का नवनिर्वाचित वडाअध्यक्ष कुश ढकालसँग उनको अबको पाँच वर्षे योजनाको विषयमा ओएस नेपालका सञ्चारकर्मी सुमन सापकोटा र कविता घिमिरेको कुराकानी ;
जम्मा ५० मतले बाजी मार्नुभयो रु यो पटक निकै हम्मे हम्मे पर्यो है तपाईलाई ? एमालेका शिवराम राजवशीं श्रेष्ठलाई झिनो मतान्तरले पराजित पार्नु भयो ?
एमालेकै मत तानेर जित्ने तपाईंको रणनीति र एमालेभित्र एउटा समूह तपाईंलाई जिताउन लागि परेको छ भन्ने आरोपबीच पनि त तालमेल होला नि ?
होइन, मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्नु परे म चुनाव नै लड्दिन । हो अब साथीभाइलाई खाजा खर्च खुवाउने छुट्टै कुरो हो, त्यसमा अलिअलि खर्च गरियो । नभए त्यसैरी पैसा खर्च गरेर नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तमा लागेको मान्छे हामीले यसो गर्दैनौं, त्यो भटाहा हो ।
हैन ,त्यो कुरा, बालेन साह भनेको पहिला पञ्चायतको विरोधमा पनि नानी मैया दाहालले एक चोटी मान्यमा जित्नुभाथ्यो बालेन साह भनेको पनि अहिलेको पद्धति सिस्टमसँग जनता रिसाएर रिस पोखेको मात्र हो । बालेन साहले पनि कुनै चमत्कार गर्न सक्नु हुन्न, उहाँले चमत्कार नै गर्न त महानगर भित्रबाट बहुमत ल्याउनु पर्यो , नभए त काम गरे साथ सहयोग गछौं, नभए हावाबाट आएको बालेन हावैबाट जानेछन् । हामीले के भनेको छौंं भने उहाँले राम्रोकाम गरे साथ सहयोग गछौं, उहाँलाई कांग्रेसले मात्र होइन एमालेले पनि सहयोग गर्छ ।
हामीले टालटुले काम लगभग सकिसकेका छौं , सजमा ढल, मंगल, पिच , ढलान अब यतिले मात्र आधुनिक शहरलाई सुरक्षित शहर बनाउन नपुग्ने भएकाले ठाउँ ठाउँमा सिसिटिभी जडान , वाइफाइन जो बनाउनु पर्यो , सडकमा उज्यालो हुनुपर्यो , ठाउँठाउँमा पार्क , फुटसल बनाउनु पर्यो निशुल्क शौचालय छैन त्यसको निमार्ण गर्नुपर्यो , धेरै काम बाँकी तर असम्भव भने केहि पनि छैन ।
हामी उल्टो दिशामा बगिराछौं , सबै म्यानेजेल छ सबै घरबाट आमुल सुधारको आवश्यक छ ।पाँच वर्ष वडा अध्यक्ष चलाएको नाताले के अनुभव गरेको छु भने, हामी उल्टो दिशामा बगिराछौं सुल्टोमा बग्नुपर्ने उल्टोमा बगेर समस्या आएको हो । अब हामी सुल्टो दिशामा बगेऔं भने धरै कुरामा सुधार ल्याउन सक्छौं । सबैकुरा म्यानेजल पनि छ काठमाडौं सफा सुग्गर , धुलो धुवाँ रहित हुन्छ , उज्यालो पनि हुन्छ , हराभरा पनि हुन्छ । तर, गर्छु भन्ने साहाश र आँट चाहियो ।
मैले जे गर्न सक्ने त्यो पाँच वर्षे को कार्यलकालमा गरे अब बाँकी रहेका अधुरा अपुरा काम गर्छु , गर्न नसकेका गर्छु वडा अध्यक्ष भएर पनि गर्न नसकेको काम अब म गर्छु , सबै वडाको समस्या भनेको एउटै हो । फोहोर , धुवा धुलो , खानेपानी , घर भाडा मन लागेको लिने , ट्याक्सी भाडा मन लागेको अशुल गर्ने यसको लागि काठमाडौं महानगरबाटै एउटा पोलिस बन्नुपर्छ । जुन पोसिलि पहिलेका काठमाडौंका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यमा देखिएन त्यो पोलिसी बनाउने नेतृत्व भए अबको पाँच वर्षमा काठमाडौं हराभरा हुन्छ ।